ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန် အကြောင်း သိကောင်းစရာများ - Open Engineering For Myanmar
Home » Open Education » ပညာရေး » ဘလူးဖီးနစ် » သင်ထောက်ကူ
» ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန် အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန် အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် Open Education စနစ်တစ်ခု လိုအပ်တယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ကစပြီး ပညာရေးအကြောင်း၊ သင်ကြားမှုအကြောင်းတွေ လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ကြားမှုနဲ့ သင်ယူမှုတွေမှာ နည်းပညာကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချသင့်တယ်လို့ ယူဆမိတာကြောင့် ငွေကြေးအသင့်အတင့်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ရေရှည်သုံးလို့ရမယ့် နည်းပညာမျိုးကို ရှာနေခဲ့မိပါတယ်။ Youtube ထဲမှာ တက္ကသိုလ်များက သင်ကြားမှု ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရင်း ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်တွေကို သင်ကြားမှုမှာ အသုံးချသင့်တယ်ဆိုတာ နားလည်လာပါတယ်။ Penn State တက္ကသိုလ်ရှိ Teaching and Learning with Technology က ရေးသားခဲ့တဲ့ white paper တစ်စောင်ကိုဖတ်ရင်း မြန်မာပြည်က ဆရာများအတွက်လည်း အသုံးတည့်မယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ပြန်လည် ဝေမျှပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ခင်ဗျား။
ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်များကို အသုံးပြုပြီး လက်ရေးမှတ်စုများ၊ ရေးဆွဲထားသော ရုပ်ပုံများ ကို မှတ်သားသိမ်းဆည်းထားနိုင်သလို အချို့ ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်များတွင် အသံဖမ်းနိုင်သော စနစ်များပါ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မှတ်စုထုတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးချခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်၊ ရှင်းလင်းချက်များ ဖန်တီးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်များကို အများဆုံး အသုံးပြုကြတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရေးစာမူတွေ၊ မှတ်စုတွေကို သိမ်းဆည်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဒီဂျစ်တယ်အသွင် ပြောင်းထားတဲ့ မှတ်စုတွေကို ဖောင်တိန်ထဲမှာ၊ ကွန်ပျူတာထဲမှာနဲ့ cloud ကို အလိုအလျောက် ပေးပို့ သိမ်းဆည်းတာတွေ ပြုလုပ် နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်အချို့ကတော့ အသံသွင်းတဲ့ စနစ်နဲ့ မှတ်စုတွေကို ချိတ်ဆက်ထားလို့ ကျွန်တော်တို့ ကြားသမျှ၊ ပြောသမျှ၊ ရေးသမျှကို ဖမ်းယူသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အများစုကတော့ မှတ်စုတွေကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ အပြန်အလှန်ပြောဆို မှတ်သားထားချက်များကို ကွန်ပျူတာ ဒါမှမဟုတ် တက်ဘလက်၊ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Penn State တက္ကသိုလ်က Teaching and Learning with Technology အနေနဲ့ အောက်ပါ ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန် လေးမျိုးကို အသုံးပြုပြီး စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• Wacom Inkling Digital Sketch Pen
• Livescribe2GB Echo Smartpen
• Livescribe2GB Sky Wi-Fi Smartpen
• Livescribe3Smartpen Pro Edition for iPad
ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ ?
ဒီဂျစ်တယ်ဖောင်တိန်များသည် သာမန် ဘောပင် တစ်ချောင်းကဲ့သို့ပင် ရေးသားနိုင်သော်လည်း ဒီဂျစ်တယ် မှတ်စုများ သိမ်းဆည်းပုံမှာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ကွဲပြား ခြားနားသည်။ အချို့ဖောင်တိန်များတွင် ကင်မရာပါဝင်ပြီး အချို့ဖောင်တိန်များတွင်မူ စာရွက်ကို ညှပ်ထားရသည့် ပြင်ပကိရိယာ အကူအညီဖြင့် ဖောင်တိန်၏ ရွေ့လျားမှုကို ဖမ်းယူ မှတ်သားထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အချို့ဖောင်တိန်များက အထူးပြုလုပ်ထားသည့် စက္ကူကို အသုံးပြုရပြီး အချို့မှာ မည်သည့် စက္ကူနှင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အထူးပြုလုပ်ထားသော စက္ကူမှာလည်း ဈေးချိုလေ့ ရှိပါသည်။ ဖောင်တိန်အားလုံးအတွက် ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ဖောင်တိန်နှင့် ကွန်ပျူတာအကြား သို့မဟုတ် အင်တာနက် cloud သို့ ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်များ သိမ်းဆည်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ဖောင်တိန်များရဲ့ ထူးခြားချက်များ
ဆရာ၊ ဆရာမများ အနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်ကို အသုံးပြု၍ သရုပ်ပြပုံများ လျှင်မြန်စွာရေးဆွဲနိုင်ပြီး ကျောင်းသား/သူများအား ထိရောက်စွာ ဝေမျှ သင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဆရာ/ဆရာမများ အနေဖြင့် ရှုပ်ထွေးသည့် အကြောင်းအရာများ ရှင်းလင်းနိုင်ရန် အိမ် သို့မဟုတ် ရုံးခန်းအတွင်း သရုပ်ပြမှုများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပေသည်။ ကျောင်းဝင်းအတွင်း စတူဒီယိုပြင်ဆင်ကာ ရိုက်ကူးမည့်အစား လျှင်မြန်လွယ်ကူသော ဒီဂျစ်တယ်ဖောင်တိန်ဖြင့် ရိုက်ကူးထားမှုများကို တည်းဖြတ်မှု အနည်းငယ်ပြုလုပ်ကာ အွန်လိုင်းသို့ လွှင့်တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ပရောဂျက်များအပေါ် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားသည့် မှတ်စုများအား ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်များဖြင့် မှတ်သားသိမ်းဆည်းထားပြီး မှတ်စုအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် ပြန်လည် စုစည်းထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အတန်းတစ်ခုအတွင်း သင်ကြားနေသမျှ သင်ခန်းစာများ ကိုလည်း ကျောင်းသား တစ်ဦးတည်းက ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်ဖြင့် မှတ်စုပြုလုပ်ကာ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် Dropbox ကဲ့သို့သော cloud-based storage system တစ်ခုအတွင်းတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မည်။ လက်ရေးမူဖြင့် ရေးသားရန် အိမ်စာပေးခံရသော ကျောင်းသားများ အတွက်လည်း ဆရာ၊ ဆရာမကို မိမိလက်ရေးမူ ပေးအပ်လိုက်ချိန်တွင် မိမိအတွက် သေသပ် ကောင်းမွန်သော ဒီဂျစ်တယ် မိတ္တူတစ်စုံ ကျန်ရှိနေပေမည်။ Inkling ကဲ့သို့သော ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်များသည် အလုပ်ခွင်အတွင်း ကလစ်ဘုတ်ပေါ်တွင် ညှပ်ထားသော စာရွက်အပေါ် ရေးဆွဲထားသမျှကို မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပေသည်။ အချို့သော အင်တာဗျူးနှင့် လက်တွေ့ မေးမြန်း မှတ်သားရသည့် လူမှုရေးပညာ၊ စိတ်ပညာနှင့် မနုဿဗေဒ ပညာရပ်မျိုးအတွက် အသံဖမ်းယူနိုင်သော ဒီဂျစ်တယ်ဖောင်တိန်များက အသုံးဝင်လှပြီး မှတ်စု ရေးသားနေချိန်တွင် အသံပါ သွင်းထားနိုင်ပေသည်။
သင်ကြားမှုနှင့် သင်ယူမှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု
ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်များကို တစ်ကိုယ်ရည် မှတ်စုထုတ်သူများအတွက် အဓိက ရည်ရွယ် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ စာသင်ခန်းအတွင်းမှ ကျောင်းသားတစ်ဦးအနေဖြင့် သင်ခန်းစာများကို ဒီဂျစ်တယ် မှတ်စု ပြုလုပ်ကာ ဆာဗာတစ်ခုတွင် စုစည်းထားနိုင်သည်။ Handwriting recognition program များကို အသုံးပြု၍ လက်ရေးမူများကို စာသားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသည့် စနစ်အပေါ် မူတည်၍ မှတ်စုများကို ရှာဖွေယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်ကြားမှုစွမ်းရည်အချို့ နိမ့်ကျနေသည့် ကျောင်းသားများအတွက် နည်းပြ၏ အသံနှင့် လက်ရေးမှတ်စု ဓာတ်ပုံများ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းကြောင့် မရှင်းလင်းသည်များကို အချိန်ယူကာ ပြန်လည်နားထောင် လေ့ကျင့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Penn State နှင့် Auburn တက္ကသိုလ်များတွင် အဆိုပါ ကျောင်းသားများအတွက် ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်များ ပံ့ပိုးထားရှိပါသည်။ နည်းပြများအတွက်လည်း ပုံဆွဲပရိုဂရမ်များ မလိုအပ်ဘဲ လွယ်လင့်တကူ သရုပ်ပြပုံများ ရေးဆွဲနိုင်စေခြင်းကြောင့် သင်ကြားမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူ ထိရောက်စေပါသည်။ စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးဆွဲမှတ်သားထားချက်များနှင့် ဒီဂျစ်တယ် ကော်ပီတို့အကြား ခြားနားမှုမရှိဘဲ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စွာ ရရှိပါသည်။ ထို့ပြင် နည်းပြများအနေဖြင့် တွက်ချက်ပုံ အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြချက်များကို အသံနှင့် ရုပ်ပုံ ကိုက်ညီမှုရှိသော အသေးစား ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ ဖန်တီးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သမားရိုးကျ ဗီဒီယို ကင်မရာများထက် သယ်ဆောင်ရ ပေါ့ပါးလွယ်ကူပြီး ချိန်ညှိရန် အဆင်ပြေစေသည်။ စမ်းသပ်မှုအရ ၉၀%သော ကျောင်းသားများသည် သာမန် မှတ်စုများထက် ဒီဂျစ်တယ် မှတ်စုများကို ပိုမိုထိရောက်ကြောင်း ယူဆကြပါသည်။
• ဝါယာလက်စနစ် အဆင်မပြေသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် အချက်အလက်များကို စုစည်းရန် USB မှ တဆင့်သာ ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
• ဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးရန် ဆော့ဖ်ဝဲများနှင့် အခြားတည်းဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်။
• အချို့ သင်ခန်းစာများကို မှတ်တမ်းတင်ရန် နည်းပြ သို့မဟုတ် ကျောင်း၏ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်နိုင်သည်။
• ဒီဂျစ်တယ်ဖောင်တိန်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကုန်ကျစားရိတ် မြင့်မားနိုင်ပေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များတွင် ထိရောက်စွာ အသုံးပြု၍ သင်ကြား၊ သင်ယူနေကြပြီဖြစ်ပါသည် -
• Penn State College of Engineering
• Penn State Office for Disability Services
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ဒီဂျစ်တယ် ဖောင်တိန်များသည် သင်ကြားမှုနှင့် သင်ယူမှု နှစ်ခုစလုံးအတွက် ထိရောက်အောင် အသုံးချနိုင်မည် ဆိုပါက အလွန်အကျိုးများသော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် Open Education ကဲ့သို့သော အွန်လိုင်းနှင့် မီဒီယာ အခြေပြု အခမဲ့ လွတ်လပ် ပညာရေး စနစ်များအတွက် အထူးလိုအပ်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ နည်းပြများအနေဖြင့် မိမိတို့ အခမဲ့မျှဝေပေးမည့် သ င်ခန်းစာများကို အားလပ်သည့်အချိန်တွင် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ပြင်ဆင်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။